४ वर्षे कार्यकाल सकाएर आज बिदा हुँदै कुलमान, थपिएला कुलमान घिसिङको कार्यकाल ? - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
४ वर्षे कार्यकाल सकाएर आज बिदा हुँदै कुलमान, थपिएला कुलमान घिसिङको कार्यकाल ?
लेखक : लेखापढी २८ भाद्र २०७७, आईतवार १४:१० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल आज आइतबार सकिँदैछ ।
बर्खायाममा समेत दैनिक ८ घन्टा लोडसेडिङ भोगिरहेको अवस्थामा घिसिङले सोही वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाण्डौ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर चर्चामा अाएका थिए । नेपाली जनाताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका लोडसेडिङ को अँध्यारोबाट मुक्तिलाई उनको सर्वाधिक सफल कार्यका रुपमा नेपाली जनताले जानेका छन् । कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्तिलाई लिएर आम नगरिकमा उत्तिकै चासो रहेको छ ।